China Vatongi fekitori uye vagadziri | SJJ
Une dambudziko rekuwana chinoshanda chipo kune ako vatengi? Vatongi vakasarudzika zvipo zvakakwana izvo zvavanogona kushandisa pahupenyu hwezuva nezuva.
Une dambudziko rekuwana chinoshanda chipo kune ako vatengi? Vatongi vakasarudzika ndizvo zvipo zvakakwana zvavanogona kushandisa pahupenyu hwezuva nezuva.
Runako Shiny inopa sundry chikoro stationery, mahofisi emahofisi kusanganisira vatongi. Mutongi anogara akasimba, akavimbika. Nemagadzirirwo akanyatsodhindwa mumasendimita maviri nemasendimita, zvinobatsira kuti iwe usarudze chimwe chezviyero zvekushandisa uye unomira kune zvinoda kushandiswa kwezuva nezuva.
Isu tinopa huni, mapurasitiki uye silicone vatongimumarudzi akasiyana-siyana, saka unogona kusarudza mutongi akakodzera kuti uwedzere mararamiro ako! Kana iwe uchida chimwe chinhu chakasarudzika, chakakosha kana iwe uri kutsvaga kutenga iwo akasarudzika vatongi, inzwa wakasununguka kutitumira isu meseji nezvikumbiro zvako.
Chinyorwa: PVC, silicone, PP, ABS, ABS + AS, PET, simbi, huni etc.
Yakadhindwa mune ese maviri masendimita uye masendimita, akajeka mamaki eako akareruka kuyerwa
Chishandiso chakatsetseka chekupimisa chishandiso, inokupa iwe yakanaka kushandisa ruzivo
Wide mafomu, akakodzera kumba, hofisi kushandisa, kunyanya kune vekuchikoro mudzidzi nevadzidzisi
Yemakwikwi Mutengo, Mahara Masampuli, Mahara Artwork Dhizaini
Zvadaro: Notebook & Anonamira notsi
tsika yakadhindwa vatongi